Ungawamakisha njani amagama abhalwe ngqindilili, bukekela, okanye ngokufaka umyalezo kwi-WhatsApp | Zonke iinkonzo ze-intanethi
UAron Rivas | | Tutorials, Whatsapp
WhatsApp lolunye lwezona zicelo zemiyalezo zithandwayo namhlanje, ukuba ayizizo ezithandwa kakhulu. Nangona kungenjalo ngoku, kodwa kwakude kudala, kuba yenye yezo beziphantse ukusukela ekuqaleni kwe-Android njengenkqubo yokusebenza, ke iphumelele ukhetho uninzi lwabasebenzisi ngaphezulu kwezinye iiapps ezifanayo, ezinje ngeLayini okanye iTelegram.
Okwexesha elithile ngoku, ukuphuculwa kunye nokongezwa kwemisebenzi kwenziwe kwisicelo ngohlaziyo olwahlukeneyo. Omnye wabo weza nolungiso lwefonti okanye iindlela ezahlukeneyo zokubhaliweyo, ezinjengesibindi, italic, uqhankqalazo kunye nokujonga endaweni enye. Kule posi Sichaza indlela onokutshintsha ngayo ukubonakala kokubhaliweyo kwi-WhatsApp ngendlela elula.
Ukwenza ngokwezifiso iicatshulwa kuWhatsApp, okanye inxenye yazo, Kufuneka songeze iisimboli ezithile. Zimbini iindlela, kodwa siza kuqala ngokubhala. Oku, ngaphandle kokusebenza kwincoko, kunefuthe kwizimo nakwizimvo. Into ekufuneka siyenzile yile ilandelayo:
1 Yenza ngokwezifiso isicatshulwa usebenzisa iisimboli
2 Enye indlela: ukusebenzisa imenyu ehlayo
Yenza ngokwezifiso isicatshulwa usebenzisa iisimboli
Uyenza njani inkalipho kuWhatsAppUkubeka ileta, igama okanye isicatshulwa esibhalwe ngqindilili, kufuneka sidibanise ii-asterisk (*) ekuqaleni nasekupheleni kwento esifuna ukuyigxininisa. Umzekelo: * isibindi *
Uqalekisa njani kuWhatsApp: Ukuba eyakho ihamba ngakumbi ngoonobumba, le nkqubo iyaphindwa, nangona inolunye uphawu. Ukubeka i-italics kwi-app, kufuneka sibhale into phakathi kwezantsi (_). Umzekelo: _cursiva_
Ungabetha njani kwi-WhatsApp: Ukuba sifuna ukuqaqambisa into esiza kuyenza okanye engalunganga, olu lukhetho olulungileyo. Ewe intsingiselo ihlala ihambelana, kunye nokusetyenziswa kwayo. Ukwenza uqhankqalazo, kufuneka sibhale into phakathi kweebhulethi (~). Umzekelo: ~ wawela ngaphandle ~
Uyenza njani indawo ye-WhatsApp kwi-WhatsAppOkokugqibela, sinokukhetha ukwenza isimboli yesimbo sokubhala. Ngale nto, kufuneka ubeke ii-aksenti ezivulekileyo (`) ekuqaleni nasekupheleni kokubhala. Umzekelo: `` indawo yokuhlala ''
Enye indlela: ukusebenzisa imenyu ehlayo
Ukuba ujonge ezi mpawu okanye iikhowudi kwaye uzifake kuyacaphukisa, unokwenza ngokulula khetha isicatshulwa kwaye uvule imenyu ehlayo evela ngokuzenzekelayo. Ukwenza oku, sicofa amanqaku amathathu athe nkqo nkqo kwaye i-Bold, i-Italic, iStrikethrough kunye neMonospaced yokugqibela iya kuvela, kunye nezinye. Sikhetha leyo sifuna ukuyisebenzisa kunye ne-voila, isicatshulwa siguqulwe ngaphandle kokuninzi.
Kwelinye icala, ukuba ufuna ukugcina iincoko zakho kwifomathi yeWord, sicebisa oku nqaku; okanye ukuba ufuna ukwazi ukuba ungazilawula njani iinowuthsi ku-WhatsApp, ndwendwela esi sithuba.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Whatsapp » Uwaphawula njani amagama abhalwe ngqindilili, akekelise, uqhankqalazo okanye ubekwe kwindawo enye kuWhatsApp
Faka i-Pocophone launcher kwi-Android yakho yasimahla ngaphandle kwe-APK